Kaonty Instagram 10 izay hanampy anao hamolavola tsaratsara kokoa | Famoronana an-tserasera
Kaonty Instagram 10 izay hanampy anao hamolavola tsaratsara kokoa
Susana Do Carmo | | Tambajotra sosialy
Izay marika te hisongadina sy hametraka ny tenany eo amin'ny tsena dia tsy maintsy manana sary tsara kalitao, manomboka amin'ny sary famantarana sy ny mombamomba ny orinasa, ka hatramin'ny doka sy atiny ao amin'ny Internet. Ny fanomezana ny mpanjifa ny sary ilain'ny orinasanao dia andraikitray mpamorona.
Mba hahatratrarana endrika tsara dia ilaina izany referansy tsara ary fantaro izay fironana ankehitriny indrindra. Noho ny habetsaky ny fampahalalana sy sary amin'ny Internet sy media sosialy dia sarotra indraindray ny misafidy hoe aiza no jerena.
Avelanay eto aminao ny kaonty Instagram 10 misy atiny tsara ho an'ny asanao manaraka.
Saika mahatratra mpanaraka iray tapitrisa dia iray amin'ireo kaonty Instagram voalohany ny logo. Izy io dia mampivondrona ireo sary amboarina tsara indrindra eran'izao tontolo izao, amin'izay dia afaka mahita hevitra saika ianao manao karazana orinasa sy marika. Hahafinaritra anao ny mahita ity mombamomba ity feno loko, toetra amam-panahy ary sary avo lenta.
Instagram profile of the account @logoinspiration
Io dia iray amin'ireo mombamomba be mpanaraka indrindra amin'ny resaka logo. Raha mitady hevitra ho an'ny famolavolana ny isotypes miloko sy mahafinaritra, ity kaonty ity dia tena tsara sary sy sary momba ny syntetika, fanaovana azy ho iray amin'ireo galeriana manintona indrindra amin'ny Instagram.
Ny famoronana sary famantarana dia dingana iray izay maharitra fotoana sy dingana manaraka. Ilaina tokoa ity mombamomba ity satria mampiseho antsika ny fomba fanatanterahana izany dingana izany. Avy amin'ny tsy mitovy sketches mitovy hevitra, mandra-pahatongan'ny grids sy refy ho an'ny fampandrosoana ny isotypes sy endritsoratra. Ho fanampin'izay, manana mpanjohy efa ho 300 XNUMX izy ary famolavolana tena mamorona.
Amin'ny maha mpamorona anao dia ilaina ny manaraka ny kaonty Pantone. Izay rehetra tokony ho fantatrao loko misy loko, ny fomba fampifangaroana azy ireo sy ny fampiharana azy na amin'ny haino aman-jery nomerika sy ny pirinty dia misy izy. Ny sary ao amin'ny kaonty dia tena manintona ary afaka manome aingam-panahy. Ary ho anao handray izany amin'ny asa ataonao amin'ity taona ity, ny Coral velona 16-1546 dia nofidian'i Pantone ho loko ny 2019.
Instagram profile of the account @pantone
Indraindray ny zavatra tsotra indrindra toy ny zavatra iray, ny velaran-tany na ny sary dia ireo niteraka ny famoronana. Izany no atao hoe @graphicroozane, miaraka amina sary sy sary entanin'ny toe-javatra andavanandro izay, miaraka amina fikitihana ny famoronana eo amin'ireo mpanakanto, dia azo avadika ho zavatra miavaka na mampihomehy. Raha tianao hevitra tsy mahazatra, ity no kaonty tokony harahinao.
Fitaovana, fonosana, labozia, ary sombin-tsary hafa, no tena tanjon'ity kaonty ity izay manampahaizana manokana amin'ny marika, izany hoe ao amin'ny ny maha-izy azy ny marika ampiharina amin'ny faritra sy vokatra rehetra ao aminy. Ny sary tsara dia tsy maintsy misy coherence sy tsy miovaova, ary eto dia asehon'izy ireo amintsika ny fomba hanaovana azy.
Instagram profile of the account @welovebranding
Nilaza izy ireo fa tsy afaka mitsara boky amin'ny fonony mihitsy ianao, saingy tsy mihatra amin'ny tontolon'ny famolavolana izany. Ity piraofilina ity dia sehatra famoronana fanovana ao amin'ny Instagram, natokana manokana ho an'ny boky famolavolana sy firakofana Amin'ny kalitao avo indrindra. Araho ity kaonty ity raha mitady hevitra tsara amin'ny famolavolana boky ianao.
Tsy toy ny @graphic_books, i @designersbookshop dia manana galerie natokana ho an'ny karazana tetikasa editorial rehetra ao anatin'izany magazine, boky, katalaogy ary koa fonosana vokatra. Ny tolo-kevitra sary izay angonin'ity profil ity dia marevaka, maro loko ary feno famoronana.
Instagram profile of the account @designersbookshop
Ny marketing'ny marika amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy sy ny tranokala dia manan-danja toy ny dokam-barotra vita pirinty, izany no antony tsy maintsy hitazomana ny mombamomba ny nomerika sy ny atiny misy kalitao. Ity kaonty ity dia ohatra tsara amin'ny fomba fanaovana famolavolana pejin-tranonkala, lahatsoratra ho an'ny tambajotra sosialy sy fivarotana an-tserasera.
Raha mpamorona UI ianao dia tsy isalasalana fa hanampy anao ity kaonty ity. Miaraka amin'ny fangatahana avo lenta Famolavolana UI Amin'izao fotoana izao, ary rehefa dinihina fa mitaky fitakiana be dia be ny zavatra niainan'ny mpampiasa amin'ny Internet, dia tokony ho manintona be ireo endriny interface tsara, avo lenta ny fahitana azy, mora azo ary mora ampiasaina.
Instagram profile of the account @graphicdesignui
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Tambajotra sosialy » Kaonty Instagram 10 izay hanampy anao hamolavola tsaratsara kokoa
Miloko sy tsy manaja: Miverina amin'ny fironana i Memphis Design